China 5 izingqimba A5 Cutting Mat, 661A5, Self healing Cutting mat Manufacture and Factory | U-Allwin
Sukuphulukiswa kwe-elf A5 ukusika ifektri mat ngqo
Umata wokusika ungenye yamathuluzi abadlali bemodeli bamaphepha okufanele bawahlomise;
UKUZIPHILISA OKUMANGALISAYO: Ikhono lokuziphilisa elimangazayo lenza ukusikeka kucishe kunyamalale futhi ukusika okuphindaphindwayo akuthinteki, kugcinwe indawo ebushelelezi nokwelula impilo yephedi nensimbi yokusika.
Kuma-intshi & cm, i-Double-Sided: Kokubili imihlahlandlela ye-Imperial ne-Metric yincazelo ephezulu ephrintiwe, ukuqinisekisa ukusikeka okunembile okuqondile nokusebenza kwekhwalithi ephezulu njalo.
IKHwalithi EBALULEKILE: Engabonakali, engagudluki, futhi enokuqina okuphezulu kakhulu kwinsimbi. The ukushuba 3mm kwenza kube obukhulu futhi iqine. Ukuzivumelanisa nezimo okuqinile nokuqina okuhle, ukuze ikwazi ukugoqeka ngentando.
KUSEBENZA KONKE: Le mathi yokusika Ifanele zonke izinhlobo zokubhala nokudweba, i-handcraft pad, ubuciko bephepha lokuqopha, ukusika okungalungile kwefilimu, ukusika iphepha, njll. Ingasetshenziswa njengephedi yegundane, futhi iyadingeka kubafundi, imindeni kanye namahhovisi .
Izinto Eziyikhwalithi Ephakeme Ezingazungezi: Ungazizwa kahle ngokusebenzisa umata omncane wokusika omelana nokugoba. Wenza isipho esihle kothisha, abakhandi kanye nama-quilters athanda ukuthandwa.
Inombolo Yemodeli Yento 661A5
Into Isisindo 0.16kg isiqeshana ngasinye
Ubukhulu bomkhiqizo 8.7 x 5.9 x 0.12 amayintshi / 22 x 15 x 0.3 cm
Usayizi (Okucacisiwe) A5
Iwaranti Yomkhiqizo: Ngokuyinhloko ngeke kube khona inkinga ngemuva kokuthengisa, sibhekana ngenkuthalo nanoma yiziphi izinkinga zangemva kokuthengisa kanye nokuxhaswa ngemuva kokuthengiswa kwemikhiqizo iminyaka engu-1.
Langaphambilini Izingqimba 5 A4 Cutting Mat, 661A4, Self ukuphulukisa Cutting mat
Olandelayo: 3 izingqimba A1 Cutting Mat, 883A1, Self ukuphulukisa Cutting mat